Misy ihany ireo lafi-tsaran’izao fihibohana izao - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny tanora sy ny hamehana ara-pahasalamana
Misy ihany ireo lafi-tsaran’izao fihibohana izao
Nanangona RWAT il y a 10 jours
Tanora efatra no maneho hevitra manoloana izao hamehana ara-pahasalamana izao. Ny fiainana mitohy, ny ho avy omanina, tsy maintsy tandremana ihany koa anefa ny fahasalamana fa mety hamoizana ny aina amin’izao fipariahan’ny coronavirus izao.
Razaiarinirina Joanicka Aurélie, mpianatra ao amin'ny école Arc-en-ciel Mahajanga
Tanora ianao. Manoloana izao vanim-potoana sarotra izao. Manao ahoana ny fiatrehanao izany ?
Sarotra tokoa raha izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa na izany na tsy izany dia miezaka ny manaraka ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana izay voalazan’ny Filoha. Amin’ny maha tanora ny tena, ankoatra ny hoe manahirana ny manao aro vava sy orona (somary sempotra sy mararirary ny loha) dia voatery nanajanona tsy satry daholo ny fiarahana amin’ny namana, ny fianarana, ny fandehanana any am-piangonana. Ny tena anefa araka ny maha tanora izay dia te hanararaotra izay fahatanorana izay ka mba te hifaly sy hitotorebika ary tia mandehandeha maka rivotra. Fehiny : somary sahirana amin’ny fiatrehana izao fiainana izao saingy miezaka hatrany ny manatanteraka ireo fepetra satria tsy te ho voan’ny aretina.
Ahoana ny fahitanao ny ho avinao ? Hanohy hianatra ve ? Sa hitady asa ? Nahoana ?
Hatreto aloha dia manjavozavo ny fahitako ny hoaviko satria iaraha-mahalala fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fianarana. Ny tenako rahateo hanala fanadinana. Fa na izany na tsy izany dia ho tohizana hatrany ny fianarana satria io hono no lova tsara indrindra.
Inona no hitanao fa lafy tsara azo raisina amin’izao ?
Ny hany lafy tsara azoko raisina aloha izany amin’izao dia ny fiarahan’ny mpiray trano sy ny mpianakavy mifandray bebe kokoa sy mifampizara hafaliana. Ferana manko ny fotoana ivoahana ny trano. Fa ankoatra izay dia ny mba miala sasatra kely izany ny saina mandra-piverenan’ny fianarana amin’ny laoniny indray.
Rasoarinivo Manohy, mpianatra ho mpitsabo mpanampy taona faharoa
Tanora ianao manoloana izao vanim-potoana sarotra izao. Manao ahoana ny fiatrehanao izany?
Sarotra tokoa ny vanim-potoana ankehitriny ary manahirana sy mampitaintaina ny fiatrehana azy, ny fianarana tsy mandeha, ny fiainana mihasarotra satria na ny fitadiavana aza tsy mandeha tsara.
Ahoana ny fahitanao ny hoavinao? Hanohy hianatra ve? Sa hitady asa? Nahoana?
Ny hoavy moa dia manjavozavo. Tsy hita taratra hoe hanao ahoana marina? Saingy tohizana ihany aloha ny fianarana satria ankehitriny tsy mahita asa raha tsy manana mari-pahaizana, eny fa na dia ireo manana mari-pahaizana ambony aza mbola sahirana tsy mahita asa. Tsy maintsy vitaina ny fianarana raha ho anay mpianatra mpitsabo mpanampy, izay vao afaka miasa rehefa ao am-pelatanana ny mari-pahaizana.
Inona no hitanao fa lafy tsara azo raisina amin'izao?
Amin’izao fotoana fihibohana izao moa dia tsy hita loatra ny lafy tsara, saingy afaka manampy ny ray aman-dreny amin'ny asa aman-draharaha andavanandro sy ny ao an-tokantrano, manam-potoana ihany koa hiezahana mianatra ireo zavatra tsy voafehy tsara tany am-pianarana nandritra iny taona iny.
Ranomenjanahary Avotiana, Mpianatra hay fiarahamonina
Tanora ianao. Manoloana izao vanim-potoana sarotra izao. Manao ahoana ny fiatrehanao izany?
Tanora aho. Sarotra dia sarotra aloha ny fiatrehana ny valanaretina eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana mihitsy fa tsy mba hoe fahasalamana fotsiny ihany. Ny tena miahiahy fatratra amin'ny fahasalamana, eo amin’ny ankohonana, ny fitantanana sy fitandroana ny gestes barrières rehetra, ny fitaintainana lava izao. Eo amin’ny sehatry ny fianarana, mihemotra lava izao, satria raha atao kajy tsotsotra dia efa mi-double izany izao satria maty taona iray tamin’ny herintaona. Eo amin'ny sehatry ny asa, mba hoe sady miasa ny tena no mianatra fa dia tsy misy na inona na inona aloha hatreto fa mikatso na ny fianarana na ny asa natao. Ny eo amin’ny toe-karena, ny tena tsy maintsy mampiasa ny filàna fototra : sakafo, rano, savony, ... Izany hoe efa misy fiantraikany tanteraka amin’ny fandrosoan'ny tena manokana izay, tara aloha izany hatreto, izay no azo ambara.
Misy fiantraikany amin'ny hoavy mihitsy satria amin’izay hoe taraiky izay. Mety misy ihany ny azo androsoana toy ny vinavina, ... saingy ny eto ambony latabatra angamba aloha no azo atao satria mbola sarotsarotra ny hanaovana action raha amin'izao vanim-potoana izao. Ny hoavy aloha dia mikatso, tsy haiko hoe izaho ve aloha no tsy mahay manararaotra fotoana sa hoe zatra an’ilay fiainana routine fa amiko tena mihahaka aloha. Araka ny voalazako hoe, ireo zavatra notanisaiko tena iankinan'ny fiainako aloha dia mikatso : fianarana, asa, ... Misy ihany ny zavatra atao na dia izany aza fa tosika fotsiny fa tsy dia tena hoe antenaina loatra. Ny fianarana aloha iny tsy maintsy tohizana foana na afaka firy taona aza vao hiverina indray, ny asa koa moa izaho efa miasa ihany fa izay hoe nikatso izay aloha. Tsy midika anefa izany hoe dia hitorevaka hiara-hikatso eto avokoa fa miezaka mikaroka sy manitatra hatrany ny fahalalana efa nananana. Mba hampivoatra hatrany na ara-tsaina na ara-batana, na ara-panahy. Izany hoe miezaka mikaroka zavatra atao foana mba tsy ho arafesina eo, manitatra fahalalana, mivelatra kokoa eo amin’ny sehatry ny asa mba ho asa mifanaraka amin’ny zava-misy fa tsy hiandry ny mbola tsy hay.
Lafy tsara moa izany tsy maintsy hoe misy foana, saingy tsy mifandanja satria ny lafy ratsy no mavesabesatra kokoa noho ny lafy tsara. Betsaka kokoa ny fotoana ananana hikarakarana ny fiainana manokana, fifandraisana amin’ny ankohonana sy ny ao an-tokantrano, ny fikarakarana ny saina, vatana, fanahy, ... Fanaovana autoévaluation, autodidacte, ... Sarotra ny mandainga raha hilaza hoe tsy nisy lafy tsara fa na ny fahalalana vaovao nivoaka nandritra ny fihibohana sy noho ny hamehana ara-pahasalamana aza dia maro tokoa toy ny télétravail amin’ny endriny maro samihafa, cours en ligne, visioconférence, bibliothèque en ligne, ... izany hoe teknolojika kokoa ny fiainana nandritra ity vanim-potoanan'ny valanaretina ity.
Randrianarisoa Jerry, filohan’ny Ong miaro ny zo maha olona
Atao anatin'ny fitandremana sy fahamalinana tanteraka ny fiatrehana izao vanim-potoana sarotra maha be ny tsimokaretina coronavirus izao. Ao anatin'ny fitandremana tanteraka satria miparitaka loatra manerana ny Nosy ny tsimokaretina, sady tsy mitovy tamin’ilay voalohany. Ny tena anefa tsy maintsy mivoaka miasa ka dia tena tsy maintsy manaja tsara ny fepetra ara- pahasalamana rehetra, ny aina rahateo lahitokana. Manaraka izany, ferana ny zavatra atao sy ny toerana aleha mba hanalavirana araka izay azo atao ny tsimokaretina mba hiarovana ny fahasalaman’ny vatana. Miala ao anaty fitangoronana maro samihafa. Ny faritra mena feno aretina ihany koa dia tena ezahana tsy aleha mihitsy, farany betsaka ny zavatra tsy maintsy natsahatra mba hisorohana ny fitangoronana be loatra, ohatra amin'izany ny fanomezana ny fampiofanana mandra-pilamin'ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena.
Ny hoaviko : hanohy hianatra aho satria ny fiainana dia fianarana foana ary ny zavatra azo ianarana tsy ho lany fa misy foana ny zava-baovao. Ny asa aloha efa tena ao anatin'ny asa tanteraka amin'izao. Tsy hitady asa hafa aloha angamba hatreto fa izay misy eo no tohizana sy ezahana hatsaraina sy ampandrosoina foana.
Ny lafy tsara azo raisina amin'izao vanim-potoana sarotra izao dia mba ahafahana manomana ny fandaharam-potoana sy ny fandaharan'asa ihany koa hiatrehana ny hoavy. Izany hoe Mametrapetraka ny teboka sy ny lamina rehetra hoenti-mandroso. Afaka maka bahana tsara hiatrehana izany hoavy izany.
Fiainam-bahoaka : Hadino ny vahoaka, ny seho ivelany hatrany no misongadina - il y a 2 jours
Ny tanora sy ny hamehana ara-pahasalamana : Misy ihany ireo lafi-tsaran’izao fihibohana izao - il y a 10 jours